China Japan- Serivisy sy fitiliana PSE |MCM
▍ Inona no atao hoe Certification PSE?
Ny PSE (Product Safety of Electrical Appliance & Material) dia rafitra fanamarinana tsy maintsy atao any Japana.Antsoina koa hoe 'Inspection Compliance' izay rafitra fidirana an-tsena ho an'ny fitaovana elektrika.Ny fanamarinana PSE dia misy ampahany roa: EMC sy fiarovana ny vokatra ary fitsipika manan-danja amin'ny lalàna momba ny fiarovana Japoney ho an'ny fitaovana elektrika.
▍Certification Standard ho an'ny bateria lithium
Fandikan-teny ho an'ny Didim-pitondrana METI momba ny fepetra ara-teknika (H25.07.01), Fanampiny 9, Batterie faharoa Lithium ion
● Toerana mahafeno fepetra: Ny MCM dia manana fitaovana mahafeno fepetra izay mety hahatratra ny fenitry ny fitsapana PSE manontolo ary manao fitiliana, anisan'izany ny circuit short interne an-tery, sns. Izany dia ahafahantsika manome tatitra momba ny fitsapana samihafa amin'ny endrika JET, TUVRH, ary MCM sns .
● Fanohanana ara-teknika: Ny MCM dia manana ekipa matihanina amin'ny injeniera teknika 11 manokana amin'ny fenitra sy fitsipika fitiliana PSE, ary afaka manolotra ny fitsipika sy ny vaovao farany amin'ny PSE amin'ny mpanjifa amin'ny fomba mazava sy feno ary haingana.
● Serivisy isan-karazany: Afaka mamoaka tatitra amin'ny teny anglisy na japoney ny MCM mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifa.Hatreto, ny MCM dia nahavita tetikasa PSE 5000 mahery ho an'ny mpanjifa amin'ny fitambarany.
teo aloha: Thailand - TISI
Manaraka: Korea- KC
Vidin'ny fanamarinana Pse Battery
Batterie Pse Certification Procedure
Serivisy fanamarinana Pse Battery
Batterie Pse Test
Batterie Pse Testing Lab
Batterie Pse Testing Laboratory
Vidin'ny fitiliana Pse Battery
Serivisy fitiliana Pse bateria
Battery Pse Test Time
Japana Certification Price
Japoney Certification Procedure
Serivisy fanamarinana Japoney
Service Testing Japon
Nahoana ny Fanampiny 9